Free Ilanis EA - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
Ity no dikan-teny maimaim-poana an'ny Ilanis EA. The Forex Robot manokatra varotra fividianana ihany. Izany dia ahafahana manombana tanteraka ny fampiasana ny EA, ny rafitry ny fitantanana ny vola ary ny fanaraha-maso ny toerana. Azo ampiasaina amin'ny varotra amin'ny kaonty tena izy. Fa ny fahombiazan'ny dikan-teny feno dia lehibe kokoa.
The Ilanis EA navoaka tao amin'ny "Market" tamin'ny Jona 5, 2014. Ny kinova maimaimpoana dia nampidirin'ny mpanjifa malaza ho an'ny mpanjifa mba hanomeana fitsapana marina.
Ilanis Free is and Expert Mpanolotsaina Ho an'ny varotra fifanakalozana, dia azo ampiasaina amin'ny varotra amin'ny Forex sy ny tsena hafa, anisan'izany ny varotra, metaly ary ny tsena indeks.
Ny EA dia mampiasa ny endriky ny adapta maoderina sy ultra-lampea FourAverage amin'ny famaritana ny tsena fidirana amin'ny tsena.
Ny fitsipiky ny toerana mitazona toerana dia mitovy amin'ny an'ny robot Forex malaza Ilan, amin'ny fampiasana averina. Saingy tsy toy ny ilan, Ilanis dia mampiasa ny fidirana mazava tsara ao an-tsena. Ny robot dia manisy fiheverana ny fanaraha-maso ny toerana, raha toa ka mandalo amin'ny làlana tsy ampoizina ny vidiny. Ho an'ity tanjona ity, ny fampitomboana ny EA dia mifototra amin'ny maripanaal (ny kôperativa ExpLot dia azo apetraka eo amin'ny sehatra, matetika amin'ny 1.1 ka hatramin'ny 1.8).
Ny varotra dia mifototra amin'ny hevitra hoe 80% ny vanimpotoan'ny tsena mihetsiketsika ao anaty trano. Mety hampidi-doza ho an'ny Expert Advisor ny fironana lava, saingy mahalana izy ireo. Mety hitranga toy izany ny zava-mitranga sasany mahazatra, toy ny ady, ny firoboroboana ara-toekarena, sns. Azo jerena ao amin'ny tranokalan-baovao ny vaovao momba izany. Tsara ny manakana ny EA amin'ny tranga toy izany. Raha tsy mahomby izany, amin'ny alalan'ny rafitra ara-pitantanana ara-bola dia azo atao amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra ny mitondra ny toerana miaraka (na ireo manoka-tena amin'ny fironana) mba hahazoana tombony, izay mety hilefitra be noho ny teo aloha. Na dia avo kokoa noho izany aza ny loza.
Ny fitsipika fototra rehefa miasa miaraka amin'i Ilanis: Aza tia faniriana, aza mampitombo ny saka, ampiasao ny fanovana azo avy amin'ny fanatsarana. Aza adino ny manatsara ny fari-pahaizan'ny tsena amin'izao fotoana izao.
Ny Expert Advisor dia natsangana hiasa amin'ny EURUSD, M15
Miasa amin'ireo foibe mifandraika amin'ny fampiasana sehatra varotra MetaTrader 4.
Miara-miasa amin'ny mpivarotra "maika" sy ny famonoana tsena.
Mamaritra automatique ny isa maromaro ao amin'ny quotes ary miasa miaraka amin'ny quotes izay misy toerana maromaro.
Miorina amin'ny fahabangan'ny faharetan'ny fifandraisana na ny famaranana ny ordinatera. Aorian'ny fanombohana ny ordinatera, ny Expert Advisor dia handray ny baikony ary hanohy hividy tsy tapaka.
Miasa irery amin'ny alàlan'ny baikony manokana izy ireo na dia efa nanapa-kevitra ny hanao varotra amin'ny fomba samihafa aza ianao.
Ilanis EA maimaim-poana - fepetra fepetra momba ny varotra
Fandefasana varotra: MetaTrader 4.
Foibe famoahana: foibe mifampiraharaha miasa amin'ny MetaTrader 4.
Potoana: tsy misy famerana.
Sarany ambany: 0.01.
Fitaovana: 1: 100 na avo kokoa.
- = FIVORIANA FARANY = -
PeriodFA1 - fe-potoana fanondro efatra
Average1_1 - Sokajy efatra (0 - 200)
- = FIVORIANA VOLA HAINGANA VOLA = -
ExpLot - Tombo-kase ho an'ny volavolana ho an'ny baiko hafa ao anatin'io andian-tantara io.
StLot - Ny lanjan'ny loka voalohany. Raha tsara ny mari-pahaizana, dia ampiasaina ho toy ny loto (Ohatra: Lot = 0.01, hanokatra ny varotra 0.01 lot). Raha tsy misy ny sandany, ny EA dia hanokatra ny tahiry 0.01 isaky ny isa voafaritra amin'ny fametrahana (Ohatra: Lot = -100, $ 500 azo jerena ao amin'ny kaonty, hanokatra ny varotra amin'ny haben'ny 0.05 maro).
StopIlanis - Manala ny fanokafana andian-dahatsoratra vaovao, hitohy ny ankehitriny.
WindowHour_ - Fiandohan'ny vanim-potoana hanidy ny fisokafan'ireo toerana vaovao (raha WindowHour_ = 10 sy _WindowHour = 15, tsy misy varotra vaovao hisokatra amin'ny elanelan-potoana eo anelanelan'ny 10: 00 sy 16: 00).
_WindowHour - Tapitra ny vanim-potoana hanidy ny fisokafan'ireo toerana vaovao (raha WindowHour_ = -1 sy _WindowHour = 15, tsy misy varotra vaovao hisokatra manomboka amin'ny fiandohan'ny andro ka hatramin'ny 16: 00).
TDW_TradeFalse - Ny soatoavina tsara dia midika hoe andro amin'ny herinandro izay tsy hanokafan'ny EA ny varotra (raha TDW_TradeFalse = 5, tsy misy toerana vaovao hisokatra amin'ny zoma izao, ny EA dia mbola hijanona toerana).
- = FIVORIANA FAMPISEHOANA = -
MaxSpread - Raha ny fiparitaka amin'izao fotoana izao dia lehibe noho io sandany io, tsy hisokatra ny varotra.
MagicNumber - Fanombohana ny isan'ny andiany majika nofehezin'ny Mpanolotsaina manam-pahaizana. Ny EA dia mifono nomerao 50.
Slippage - avela hiadana.
fanakatonana fanokafana toerana vaovao
vanim-potoana hiarovana ny fanokafana